Ma hagaajineysaa dib u eegista macaamiisha mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu horumariyo SEO?
Dhamaan ganacsiyada internetka waxay u baahan yihiin in la helo qaab tayo-gal ah oo raadin tayo sare leh si ay u soo jiitaan macaamiisha iyo kor u qaadista dakhliga. Waxaa jira siyaabo badan oo aad saameyn ugu yeelan karto boggaaga SEO-ga ee aan ahayn hab dhaqameed ama waxtar leh. Waxaad shirkad degaankaaga u adeegsan kartaa Google My Business ama daabacan maqaal ku saabsan adeegyadaada mid ka mid ah majaladaha internetka ugu wanaagsan.
Waxaa intaa dheer, waxaad abuuri kartaa waxyaabo u gaar ah oo ka qaybgalaya oo dadku wadaagayaan. Dabcan, dhammaan hababkaan waa kuwo faa'iido leh isla markaana kor u qaadaya awooddaada matoorada iyo isticmaaleyaasha labadaba. Si kastaba ha ahaatee, xasuuso waxa aad bixinayso dareenka markaad wax dalbeyso internetka. Iyadoo malaayiin kale oo isticmaalayaal ah, waxaan tixgalin siinayaa macaamiisha dib u eegida shirkadda ka hor inta aan la samayn wax go'aan ah.
Dib u eegista macaamiishu waa mid muhiim ah haddii aad iibinayso alaab ama adeeg. Macaamiishaada mustaqbalka waxay u eegaan asxaabta, qaraabada ama kuwa kale ee isticmaala jawaab celin ku saabsan adeegyo shirkad gaar ah. Qofna ma doonayo in lagu khiyaaneeyo ganacsato khiyaano leh. Taasi waa sababta ay u tixgelinayaan wixii macluumaad ah ee kor u qaadi kara daacadnimadooda iyo kalsoonida astaanta. Dunida dijitalka ah ee hadda jira ayaa macluumaad kasta oo si sahlan loo heli karo oo loogu talagalay dadka isticmaala. Waxaa jira xitaa codsiyo noo ogolaanaya inaanu ku sawirno barcode oo si deg-deg ah uga jawaab celino. Taasi waa sababta aad u baahan tahay in aad si gaar ah ugu fiirsato dib u eegistaada ganacsiga si aad u hubiso in macaamiishu ay dhici karto inay go'aan sax ah u geli karaan shirkaddaada.
Dib u eegis sida habka ugu wanaagsan ee lagu hagaajin karo boggayaga SEO
Waa in la sheegaa, in dib u eegistu aanay ahayn kaliya waxtar u ah dadka isticmaala laakiin sidoo kale ganacsigaaga guud ahaan joogitaanka internetka. Waxay hagaajin karaan aqoonsigaada brandka iyo soo jiidashada macaamiisha cusub ee suurtogalka ah ee goobtaada. Jawaabcelin macquul ah ayaa saameyn ku yeeshay meeleynta mashiinka raadinta oo aad kordhisid qiimaha riixitaanka ee goobtaada. Shirkadaha waaweyn waxay leeyihiin waaxyo kala duwan oo PR kaas oo masuul ka ah dabeecada isticmaalka ee shirkadda iyadoo joogitaan muuqaal ah laga helayo goobaha dib u eegista macaamiisha waa qayb muhiim u ah mashiinnada raadiyeyaashu qadariyaan oo ku daraan darajadooda xisaabeed si ay u go'aamiyaan maamulka domainka iyo tixgelinta.
Sida laga soo xigtay xogta tirakoobka, qadarka ugu weyn ee dib u eegista macaamiisha waa wax xun, sababtoo ah marka ugu badan ee macaamiisha ay jeclaan lahaayeen in ay la wadaagaan waayo-aragnimadooda xun ee shirkadda waxayna u digaan dadka kale khatarta. Sidaas daraadeed waxaad u baahan tahay inaad sameyso sida ugu wanaagsan ee aad ku dhiirrigelineyso alaabta ama dib u eegida adeega oo macaamiishaada ka dhigo inay ka baxaan jawaab celin wanaagsan oo run ah.
Waxaad ubaahan tahay inaad bilowdo ololahaaga ganacsigaaga adigoo dhameystiraya profilesada boggaga dib u eegista caanka sida Google+ Local, Yahoo! Liiska Magaladda, Yelp, iyo kuwa kale. Taas ka dib, waxaad u baahan tahay inaad istiraatiijiyad ku sameyso sida loo abuuro xiriiro macaamiil ah iyaga oo ku boorinaya inay ka tagaan dib u eegista oo ay noqdaan wakiiladaada caanka ah ee dunida internetka. Waad weydiisan kartaa macaamiishaada inay kula wadaagaan ra'yigooda ku saabsan badeecooyinkaaga ama adeegyadaada adoo adeegsanaya boggaaga, e-mail, telefoon ama xitaa u dir kaar ay weydiisanayaan dib u eegis. Waxaa lagugula talinayaa inaanay automati-hannaankan sameynin haddii ay suurtogal tahay in dadka isticmaala ay qadariyaan xiriir gaar ah Source .